Siciid Deni iyo Axmed Madoobe oo ka ambabaxay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Siciid Deni iyo Axmed Madoobe oo ka ambabaxay Muqdisho
Madaxweynayaasha Maamullada Puntland iyo Jubbaland , Siciid cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam ‘Madoobe’, ayaa dhawaan ka amba baxay Magaalada Muqdisho, iyagoo ku sii wajahan Garowe iyo kismaanyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Daqiiqado yar ayaa u dhaxeeyay duulimaadka labo diyaaradood oo kala qaaday Madaxweynayaasha, waxaana la filayaa in ay si adag uga hadlaan fashilka ku yimid wada hadalladii doorashooyinka iyo muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo.
Ku dhawaad Afartan cisho oo ay ku sugnaayeen Muqdisho, si loo gaaro heshiis loo dhan yahay oo ay gar wadeen ka ahaayeen Wakiillada Beesha Caalama ee jooga Soomaalya, ayaa fashil iyo kala dareer ku soo idlaaday, waxayna madaxdaan go'aan-sadeen, in ay ku laabtaan degaannadoodi kadib muddo kordhintii shalay.
Ilo Xog ogaal ah, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in shirkii saaka dhex maray Golaha Midowga musharixiinta iyo Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, ay Deni iyo Madoobe, oo caro ka muuqatay ay Midowga la wadaageen qorshe xooggan oo ay damca san yihiin, taas oo loo fasirtay in ay guud ahaan hakin doonaan wada shaqeyntii Dowladda Fadaraalka.
Waxaa la filayaa in ay dhawaan ay soo saaraan shirar jaraa’id oo ay kaga hadlayaan, safarkoodii iyo sababihii keenay burburkii shirkii wada tashiga qaranka ee socday teendhada Afisyooni.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo iyo Golaha Midowga Musharixiinta ayaa hadda isugu haray Muqdisho, waxanaa la filayaa in maalmaha soo aaddan Muqdisho gasho xaalado siyaasadeen oo aan la saadaali karin.